Home » Archives by category » लेख/विचार (Page 5)
यन्या पून्हि / इन्द्रजात्रा २०७१ टोखा फोटो फिचर
टोखामा पाँच दिन मनाइने यन्या पून्हि हिजोदेखि विधिवतरुपमा सम्पन्न भएको छ । टोखामा रहेका दाफा खलकहरुको मौलिक साँस्कृतिक बाजागाजा सहित धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको स्थलहरुमा सामुहिक बत्ति दिएर हर्षोल्हासका साथ मनाइने गर्दछ । आत्मियता र सदभावको…
संघियता भनेको के हो ?
संघीयताको बहस चलिरहेको वेला मुख्य रुपमा निम्न कुराहरु बुझ्ने र बुझाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्छ !! (१) एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य प्रणाली भनेको के हो ? एउटा वाक्यमा भन्नु पर्दा राज्यसत्ताको सम्पूर्ण शक्ति र अधिकारहरु सबैकेन्द्रमा हुने शासन प्रणालीलाई एकात्मक…